Andron’ny ankizy: nantsoina ny sehatra tsy miankina | NewsMada
Andron’ny ankizy: nantsoina ny sehatra tsy miankina
Mampanahy ny zava-misy iainan’ny zaza malagasy, amin’izao fotoana izao. Nikarakara fihaonana niaraka amin’ny sehatra tsy miankina ny Unicef, ny talata hariva teo, teny Antaninarenina , nanaovana antso handraisan’izy ireo anjara ho an’ny ankizy manokana.
Maro amin’ireo zon’ny ankizy no tsy voahaja toy ny fidirana an-dakilasy, ny fahazoana kopia nahaterahana, ny fitsaboana noho ny fahasahiranana. Matetika,tsy misy mijery ny filan’ny ankizy fa manaraka izay fanapahan-kevitry ny olon-dehibe na ny ray aman-dreny mpiahy fotsiny. « Mila hovana ny zava-misy ary voakasika koa ny sehatra tsy miankina ka entanina izy ireo hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra mpiahy ny ankizy », hoy ny solontenan’ny Unicef eto Madagasikara, i Michel Saint-Lot, nandritra ny lahateniny.
Namaly ny antso ny tanora mpandraharaha malagasy vonona hanampy ny ankizy hihoitra amin’ny fiainana. Anisan’izany Razafimahefa Matina, 20 taona mpitantana orinasa vao misandratra, maniry ny hanampy ny tanora malagasy avy amin’ny fianakaviana sahirana hifehy ny teknolojia vaovao ahafahany mahazo asa any aoriana. Betsaka ny mpiandraikitra orinasa nanoina ny antso teny Antaninarenina. Tanjon’ny fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny ankizy ny hanangona vola entina manampy ny kilonga hiditra an-tsekoly, hahazo rano madio, hisitraka fitsaboana.
Ankoatra ny sehatra tsy miankina, afaka mitondra ny anjara birikiny koa ny daholobe amin’ny fanaovana sonia ny antso ataon’ny Unicef ao anatin’ny tranonkalany ho an’ny mpitondra rehetra ho tombontsoan’ny ankizy.